Dhaqdhaqaaq ciidan oo laga dareemayo Kontoroolka magaalada Kismaayo
Kismaayo:-Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ciidamada huwanta ay saaka wadaan diyaargarow iyo dhaqdhaqaaq ciidan waxaana si weyn looga dareemayaa Kontoroolka magaalada Kismaayo ee Madhamaato halkaas oo ay saaka gaareen ciidamo ka tirsan Huwanta.
Dhaqdhaqaaqa ciidan ee saaka laga dareemo Kontoroolka magaalada Kismaayo ayaa ku soo aaday ka dib markii shalay uu ku goodiyey Hogaamiyaha Ururka Raaskambooni Sheekh Ahmed Madoobe in ay weerar ku yihiin Deegaanada ay gobalka J/hoose kaga sugan yihiin Ururka Al-Shabaab wuxuuna si gaar ah farta ugu fiiqay deegaanada Buulo Gaduud iyo Jilib.
Saraakiil iyo ciidamo ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa haatan ku sugan Degmada Jilib waxaana ciidamadaas horkacaya Ibraahim Afgaani waxayna ciidamaaas diyaar garow ugu jiraan sidii ay dagaal dheer ula gali lahaayeen ciidamada huwanta ee qabsaday deegaano badan oo ka tirsan gobalka J/hoose.
Dhinaca kale Taliye ku xigeen ciidanka AMISOM Col. Karncho ayaa sidoo kale ku hanjabay in Al-Shabaab ay kala wareegi doonaan deegaanada ay haatan kaga sugan yihiin J/hoose inta ka dhiman sanadkaan .
Isku soo wada duuboo Baalxooftanka iyo Hanjabaada ay wadaan saraakiisha ciidanka huwanta ayaa waxaa la wada dhowrayaa halka ay gaarto iyada oo Ururka Al-Shabaab ay dajisteen qorshahooda dagaal inta ay rabto ha gaarto awoodoodee.